သဘာဝတရားနဲ့ထိတွေ့ပါ…. - YOYARLAY Digital Media and News
တစ်နေ့တာမှာ တိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်ကိုအမှီလိုက်ဖို့ နိုးတာနဲ့ အလုပ်ခွင်ဝင်ဖို့ပြင်တယ်။ ပြီးရင် တစ်နေကုန်အလုပ်တွေလုပ်တယ်။ ညမိုးချုပ်မှ အိမ်ပြန်တယ်။ မိသားစုကို အချိန်ပေးတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့တာကို ကုန်ဆုံးနေသူက ခပ်များများပါ။ ဒီလိုနဲ့ ခရီးမထွက်ဖြစ်သလို ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လှလှပပဖူးပွင့်နေတဲ့ ပန်းလေးတွေ စိမ်းစိုနေတဲ့အပင်လေးတွေကိုတောင် မကြည့်မိဘူးဟုတ်။ ဒါက ကောင်းတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး။ လူတိုင်းဟာ စိတ်အပန်းဖြေတဲ့အနေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိတွေ့ဖို့လိုပါမယ်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်က ဖြတ်သွားရုံနဲ့ ထိတွေ့တာမဟုတ်ပါဘူး….
သဘာဝတရားကြီးကတော့ရှိနေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုစိမ်းစိုနေတဲ့အပင်တွေ၊ လှလှပပဖူးပွင့်နေတဲ့ ပန်းလေးတွေ၊ ကြည်လင်ပြာလဲ့နေတဲ့ ကောင်းကင်ကြီးကို ကိုယ်တိုင်က မကြည့်မိရင်တော့ သဘာဝတရားကြီးနဲ့ ထိတွေ့မှုမရှိဘူးလို့ပဲ ဆိုပါရစေနော်။ သဘာဝတရားက သူ့ဘေးကဖြတ်သွားရုံနဲ့ ထိတွေ့မိဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ လေနုညှင်းလေးတွေက မျက်နှာကို ထိခတ်တိုက်ခတ်တာကြောင့်တော့ ထိတွေ့မိနိုင်တာပေါ့။
သဘာဝတရားက လူတိုင်းကို ထွေးပွေ့ပေးထားပါတယ်
သဘာဝတရားကို ခံစားဖို့ အခကြေးငွေအများကြီးသုံးစွဲဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ မနက်ခင်းလမ်းသွားတဲ့အခါ၊ ကားစီးတဲ့အခါ မျိုးမှာတွေ့ရတဲ့ အပင်လေးတွေ၊ ပန်းလေးတွေကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ကို မျက်စိအတွက်ရော စိတ်အတွက်ပါ အထောက်အကူ ပြုပေးနိုင်တာပါ။ ကြည်နူးစရာပုံရိပ်လေးတွေက စိတ်ချမ်းသာစေတာအမှန်ပဲလေ။ အိမ်မှာ ပန်းလေးတွေစိုက်ထားမယ် သူတို့လေးတွေပန်းပွင့်လာတဲ့အခါ မနက်ခင်းမှာ လေတိုက်တိုင်း မွှေးနေတဲ့ မွှေးရနံ့လေးက စိတ်ကို ကြည်လင်စေတာ အမှန်ပါပဲ။
သဘာဝတရားက ခံစားတတ်သူတိုင်းကို အခုလိုမျိုးကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိစေနိုင်ပါတယ်။
လေ့လာမှုရလဒ်တွေ အရ သဘာဝတရားနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါ
အလုပ်တွေထဲမှ အရမ်းပင်ပန်းလာလို့ စိတ်ဖိစီးလာတဲ့အခါ ကန်ဘောင်တစ်နေရာရာမှ ထိုင်တာမျိုး၊ ပန်းခြံထဲက မြက်ခင်းပေါ်မှာ ထိုင်တာမျိုးလုပ်ပေးပါ။ ပန်းပင်လှလှလေးတွေကြည့်တာကလည်း စိတ်အပန်းပြေစေမှာပါ။ ဒီလိုမျိုး သဘာဝတရားနဲ့ ထိတွေ့မှုက စိတ်ဖိစီးမှုကို ပြေလျော့စေနိုင်ပြီး စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်းမမှန်တာ၊ ကြွက်သားတွေ တောင့်တင်းနေတာ၊ ခေါင်းကိုက်တာ၊ ဗိုက်အောင့်တာ၊ ဖျားနာတာမျိုး မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဒါတင်မကပါဘူး။ အလုပ်ခွင်မှာ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ရရှိစေဖို့လည်း ထောက်ပံ့ပေးပါသေးတယ်။
အပြင်ထွက်ပြီး သဘာဝတရားကို ထိတွေ့ခံစားလိုက်မှုက သင့်ကို လန်းဆန်းတက်ကြွပြီး အင်အားပြည့်သွားသလို ခံစားရစေမှာပါ။ သဘာဝတရားကို ထိတွေ့တဲ့အခါ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်မှုက ခန္ဓာကိုယ်မှာ အင်အားပြည့်သလို ခံစားရစေမှာပါ။ စိတ်ဆိုးနေတာ၊ စိတ်ပူပန်နေတာတွေကိုလည်း သက်သာစေမှာပါ။ ဒီလိုမျိုး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ အင်အားပြည့်ဝမှုက အလုပ်ခွင်မှာရော လူမှုဘဝမှာပါ အကောင်းဆုံး အထောက်အကူပြုနိုင်မှာပါ။
သဘာဝတရားနဲ့ ထိတွေ့မှုက ခန္ဓာကိုယ်မှာ သွေးစီးဆင်းရောက်ရှိမှုကောင်းစေနိုင်ပြီး ဦးနှောက်ထဲကိုလည်း သွေးစီးဆင်းရောက်ရှိမှုကောင်းစေနိုင်ပါတယ်။ အာရုံကြောစနစ်ကို ကျန်းမာစေနိုင်သလို စိတ်ကူးဉာဏ်ကို ရင့်သန်စေနိုင်ပါတယ်။ မှတ်ဉာဏ်ကောင်းစေမှုအတွက်လည်း အကောင်းဆုံးအထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။
အဖြစ်အပျက်တစ်ခုခုကြောင့် ဒါမှမဟုတ် တစ်စုံတစ်ယောက်ကြောင့် စိတ်ပင်ပန်းနေရတယ်ဆိုရင် သဘာဝတရားက အကောင်းဆုံး ကုစားပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ တစ်နေကုန် ကွန်ပျူတာရှေ့ထိုင် အလုပ်လုပ်ရတာကြောင့် စိတ်ပင်ပန်းနေတာ ကိုလည်း သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ တစ်နေ့တာရဲ့ ပင်ပန်းဖွယ်ရာ အလုပ်တွေထဲကနေ ခဏလောက်ရုန်းထွက်ပြီး သဘာဝတရားကို ခံစားပေးပါ။ စိတ်ရောကိုယ်ပါ လန်းဆန်းတက်ကြွစေမှာပါ။
ရောဂါတစ်ခုခုခံစားရသူတွေ၊ မတော်တဆမှုတစ်ခုခုကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနေသူတွေကိုလည်း ပြန်လည်သန်စွမ်းမှုရေး အတွက် ကုသမှုတွေခံယူနေချိန်မှာ သဘာဝတရားနဲ့ ထိတွေ့ပေးပါ။ ဒီလိုထိတွေ့ပေးမှုက အချိန်တိုတိုနဲ့ လူနာကို ပြန်လည်ကျန်းမာလာစေဖို့ အထောက်အပံ့ပေးနိုင်သလို အဆိုးမြင်အတွေးတွေ တွေးမိနိုင်ခြေကိုလည်း အကောင်းဆုံး ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ရောဂါကြောင့် နောက်ဆက်တွဲရောဂါပြဿနာတွေ ဖြစ်မလာအောင်လည်း အကောင်းဆုံး ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Previous Previous post: အဖြစ်များတဲ့ အသားရေပြဿနာအတွက် ဖြေရှင်းနည်းများ
Next Next post: မျိုးသက်လွင်အတွက် တိုက်ခန်းဝယ်ပေးဖို့ စဥ်းစားနေ